अर्थमन्त्री खतिवडाले भने- करको विषयमा म कठाेरै छु
नेपाल लाइभ आइतबार, फागुन ११, २०७६, १२:४०
काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले करको विषयमा आफू कठाेर भएकोले यसलाई बुझिदिन अनुरोध गरेका छन्। राष्ट्रिय बीमा संस्थानको ५३औं वार्षिकोत्सवका अवसरका आयाेजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले तल्लो वर्षका मानिसहरुलाई उत्थान गर्न कमाउने वर्गबाट कर असुल गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रीको दायित्व भएको बताए।
उनले भने 'कर भनेको धेरै कमाउनेबाट लिने र कमाउन नसक्नेलाई दिने हो। तपाईंहरु कर छुटैछुट भन्नुहुन्छ। तपाईंहरुलाई कर छुट दिँदाखेरि गरीब व्यक्तिहरुले पाउँदैनन्।' 'अर्थमन्त्रीको काम कर उठाउने र पुनर्वितरण गर्ने हो,' उनले भने, 'तपाईंहरुले कर दिनु भएन भने गरीबकाेमा पुग्दैन। हामी तल्ला वर्गको उत्थाने गर्ने पार्टी भन्छौं। श्रमिकको पार्टी भन्छौं। गरीबकाे पार्टी भन्छौं। तिनीहरुको उत्थान कसले गरिदिने, हामीले नगरे कसले गर्ने?'
कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले अर्थमन्त्रीलाई बीमा गर्दा दिँदै आएको कर छुटको दायरा बढाउन अनुरोध गरेका थिए। अहिले २५ हजारको सीमालाई बढाउन अनुरोध गर्दै गर्दा सबै क्षेत्रमा कर छुटमात्रै दिन नसिकेन अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो। यसै शिलशिलामा उनले आफू करको विषयमा कठाेरै रहेकाे बताएका हुन्।
खतिवाडले बीमा कम्पनीहरुले स्थानीय भाषा बोल्ने अभिकर्ता र स्थानीय भाषाकै प्रचार सामग्री बनाउन कम्पनीहरुलाई अनुरोध गरेका छन्। स्थानीय भाषाको अभिकर्ता र प्रचार सामाग्री नहुँदा सीमाका नेपालीले सीमापार गएर बीमा गराउने गरेको भन्दै त्यता पनि ध्यान दिन उनले अनुरोध गरे।
विदेशमा दाबी भुक्तानी डिजिटलाइज भएर घटना स्थलमै दाबी पाउने अवस्थाको सिर्जनाको विकास भइसकेको हुँदा नेपालमा पनि यस विषयमा सोच्न उनले अनुरोध गरे। बैंकिङ क्षेत्रमा सम्पूर्ण बैंकहरुलाई आफ्नो कर्जा प्रवाहको न्युनतम ३ प्रतिशत कर्जा लघु कर्जा हुनुपर्ने व्यवस्था बढेर अहिले ६ प्रतिशतको कभरेज भएको उदाहरण दिँदै खतिवडाले बीमा क्षेत्रमा पनि यस्तै पोलिसी आवस्यक परेको बताए। उनले बीमा समितिलाई इङ्गित गर्दै सम्पूर्ण बीमा कम्पनीहरुलाई सम्पूर्ण बीमाको ५ प्रतिशत बीमा लघुवीमा हुनुपर्ने व्यवस्था लागु गर्न अनुरोध गरे।
नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष शिवनाथ पाण्डले पनि बीमा गरे बापत कर छुट दिँदा राज्यलाई घाटा नहुने बताए। कर छुट दिएमा बीमा कम्पनीले बीमा शुल्क बढाउने हुँदा कम्पनीको नाफा बढ्छ। यसले पनि राज्यको कर खुम्चिने भन्दा बढ्ने उनकाे धारणा थियाे।
कार्यक्रममा बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले आफू समितिमा आएको तीन वर्ष बित्दा पनि संस्थाको पूर्ण सुधार गर्न नसकेको बताए। विगत ५/७ वर्षदेखि हुन नसकेको लेखापरीक्षण तथा एक्चुरियल मूल्याङ्कन आफ्नो बाँकी १० महिनाको कार्यकालमा पुरा हुने प्रतिबद्धता जनाए। उनले प्रतिवद्धता दिदै गर्दा अर्थमन्त्री खतिवडाले 'हेरौला' भन्दै शुभकामना दिए।